> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka PC in Nexus 5
Aad dhib ku files ka PC gudbaayo Nexus 5?
Aaad ayaan Nexus 5 shalay. Sidaas daraaddeed waxaan soo guuriyeen oo dhan PIC iyo music aan ka SGS3 in aan PC via USB. Waxaan isku dayay dayanayaan via USB laakiin go lahayn kuwa files geli phone cusub. Phone waxay muujinaysaa sida drive ka yar aan computer. Waxaan heli karaa telefoonka oo guji agagaarka. Marka waxaan bilaabi isku dayaya inay minguuriyeen badan files, tagaa malaha 10-15 secs markaas uun xero, oo si dhab ah sidhab ah nidaamka file dhan ii on my PC ilaa aan kugu xidho cable USB ka telefoonka. PC waa 64b win7. Fikrado kasta?
Shaki kuma jiro in ay tahay hab wanaagsan oo lacag la'aan ah si ay u gudbiyaan files warbaahinta ka computer si aad cajiib Google Nexus 5 via cable USB. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar, wax noqon waayaan sidii uu. Sida user ee kor ku xusan, waxaa laga yaabaa in aad ku guul dareysato in ay ha computer ka ogaado aad Nexus 5 guul leh. Xitaa hadii ay guuleysato, waxaad leedahay in ay la kulmaan xaqiiqada ah in, aad jiidi karaan oo kaliya jeedi music, sawiro iyo videos dhexeeya computer iyo Nexus 5. Marka ay timaado in files kale, sida farriimaha qoraalka ah, xiriirada iyo barnaamijyadooda, aad samayn karto ma aha waxaan uga qaaddaan inta sheeko la sheegay.
Sidee si ay u gudbiyaan files ka PC in Nexus 5?
Xaaladdan oo kale, waxaan u soo jeedin in ay tahay in aad siiyo qaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad shot a. Waxaa ka mid ah qalabka dhinac saddexaad badan, ka Wondershare MobileGo for Android taagan ay u dhan-in-ka mid ah maamulka Android. Sidaa daraadeed, aad awoodaan si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda, xiriirada, waraaqaha, music, videos iyo sawiro ka PC in Nexus 5 leh ama cable USB aan. Intaa waxaa dheer, waxa aad bixisaa xarunta khayraadka online ka kaas oo aad kala soo bixi kartaa barnaamijyadooda, muusig iyo cajallado fiidyow in aad Nexus 5.
Download iyo rakibi qalabka kombiyuutarka Windows ah oo ay leeyihiin isku day ah.
Tallaabada 1. Isku aad Nexus 5 ilaa computer la / cable USB oo aan
Connect aad Nexus 5 via cable USB
Ka qaada cable USB iyo fur in computer si aad u hesho Nexus 5 xiran. The MobileGo for Android waxaa lagu ogaan doonaa dhakhsaha badan oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Connect aad Nexus 5 ilaa kombiyuutarka wirelessly
Ka hor inta xiriir WiFi ah, waa in aad hubisaa in aad ku rakibtay app MobileGo ku saabsan Nexus 5. sameeyo Or, aad u baahan tahay si ay u soo baxdo iyo rakibi app MobileGo hore.
Burcad MobileGo desktop u Adnroid qalab kombiyuutarka ah. Daar WiFi aad Nexus 5. Markaas, ka jaftaa app MobileGo aad Nexus 5 oo ay u isticmaalan in lambarka sirta QR uu furmo suuqa hoose kombiyuutarka. Marka guuleysto, aad Nexus 5 lagugu xidhayaa oo ka muuqan suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Transfer files ka computer si Nexus 5
Waa iska cadahay in dhammaan faylasha aad Nexus 5 waxaa loo kala saaraa galeeysid ka tagay. Si aad u wareejiyo mid noocee ah file, aad riix qaybta u dhiganta iyo files dejinta si aad Nexus 5.
Tag Apps . Daaqadda app, guji rakib inay dajiyaan iyo rakibi barnaamijyadooda badan si aad Nexus 5.
Riix Music , Videos ama Photos . Daaqadda u dhiganta, guji saddexagalka hoos Add ku darto music / video / sawir ama folder aad Nexus 5. Marka qalab ay u cadaato in music ah laga keeno iyo videos aan lagu ciyaari karo aad Nexus 5, waxaa idin ​​xusuusin doonaa haddii aad rabto inaad iyaga badalo ama aan.
By gujinaya Xiriirada , waxaad geli suuqa kala xiriir ah. Riix Import / Dhoofinta > xiriir Import ka computer . In menu hoos-hoos, aad leedahay 5 doorashooyin: ka file vCard , ka Outlook Express , ka Outlook 2003/2007/2010/2013 , ka Windows Live Mail oo ka Windows Cinwaanka Book .
Fiiro gaar ah: SMS ah qaab XML in aad dhoofiyo la qalab aad la keeno karo. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ka heli files XML habab kale, aad awoodi waayeen in ay iyaga soo dhoofsadaan.
Si aad u gudbiyaan waraaqaha, sida DOC, Excel, PPT, PDF ama kuwa kale, waxaad riixi kartaa Files . Under aad category card SD, aad jiidi karaan jeedi wax dokumenti ah si aad Nexus 5.
Download qalab waxtar leh si ay u gudbiyaan files si Nexus 5 ka PC.